घरको आर्थिक अवस्था नाजुक भएपछी प्रदेशिएका एक युवक काम गर्ने क्रममा दुर्घ’टनामा परेर अपांग भए । त्यस्पछी उनी आफ्नो अपांग शरीर लिएर घर फर्किए । यता घर फर्किंदा आफ्नी मायालुलाई कसैले बिहेको नाटक गरी लगेर अबै’ध देह ब्यापारको धन्दाका लागी बेचेको हुन्छ । तर उनलाई पनि सामाजिक संस्थाले उद्धार गरी घर सम्म ल्याइदिन्छन । अनी हाम्रो समाजले उक्त युवतीलाई अस्विकार गर्छ । त्यस्पछी दुईजनाको बिचमा आ-आफ्ना दु:ख साटिन्छ ।
यती गहन बिषयलाई मिठा शब्दहरुसंगै गीतमा प्रस्तुत गरे गीतकार नारायण कंडेलले । ‘आफ्नो पन’ गीतको अहिले सर्बत्र चर्चा चलिरहेको छ । कँडेलको शब्दमा सर्जक डा. शिव सुबेदिले मिठो लय सिर्जना गरेका छन । गीतमा सुमधुर स्वरका धनी गायक युवराज आचार्य र पछिल्लो समयकी उदाउँदो गायिका सुनिता बुढाको आवाज रहेको छ ।
भिडियोमा एउटा बिल्कुलै फरक कथालाई उठान गरिएको छ । भिडियोमा कलाकार सनम कठायत र रोशनी कार्की जीवनत अभिनय देख्न सकिन्छ । निर्देशक विनोद भण्डारीले निर्देशन गरेको भिडियोलाई करण चैसीरले क्यामेरामा कैद गरेका हुन । बिकास ज्ञवालीले सम्पादन गरेका गीतको भिडियो शिव सुवेदी युटुब च्यानलबाट सार्वजनिक गरिएको छ ।
गीतको पुरै भिडियो हेर्नका लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस् :-
आफ्नो पन, करण चैसीर, डा. शिव सुबेदि, नारायण कंडेल, बिकास ज्ञवाली, युवराज आचार्य, रोशनी कार्की, विनोद भण्डारी, सनम कठायत, सुनिता बुढा
छिमेकिले साँध मिचेर घरसम्म आइपुगेपछी… (हेर्नुहोस् भिडियो सहित)
अध्यादेश आफ्नोभन्दा पनि अरू पार्टीलाई लक्ष्य गरेर ल्याएको स्पष्टीकरण
नेपालमा थप ५३८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको कुल संख्या १० हजार नाघ्यो
नेपालमा मंगलबार थप ३१६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि